Google taageero technology android iyo Apple ka dambeeya iPhone yihiin labada kooxood in mar walba hubso in aan bilowno sheyga ugu wanaagsan ee dadka isticmaala si ay u raaxaystaan. Si loo hubiyo in dadka isticmaala ku raaxaysan adeegyada cid saddexaad kala duwan ayaa sidoo kale xaqiijiyey in codsiyada loo horumariyo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Mid ka mid ah erey-noocaas ah oo la soo bandhigay ee macruufka 7+ sidoo halkaas oo si toos ah user u hagaagsan karaa Gmail ka xisaab iPhone oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Tutorial waxa kale oo hubin doona in user la iftiimiyo dhinacyada kale ee ka soo kala iibsiga macruufka wareejinta xiriirada Gmail si iPhone marka laga reebo. Si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user ee arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in tutorial la raacay hoos talo khabiir, haddii user waa in ay fahmaan talaabo kasta oo aan awoodin. Waxa kale oo hubin doona in natiijooyinka laga helo si toos ah oo waafaqsan arrin sakhiray in ka yar yahay wadahadal. Waxaa sidoo kale in la xusay in qayb ka mid ah ugu wanaagsan ee tutorial waa in Screenshot la xiriira waxaa lagu daray iyo sidoo kale sabab la mid ah user sidoo kale waa ay awoodaan in ay fahmaan dhibcood hab dheeraad ah oo ku cad.
Qeybta 1: Isticmaalka macruufka 7+
Qeybta 2: Isticmaalka Mac ama PC
Waa mid ka mid ah hababka ugu fudud oo u baahan jirin goobaha dheeraad ah sidii dhammaan qalabka iyo shuruudaha yihiin nidaamka macruufka iyo sabab la mid ah waxa aad u cabsi badan oo ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in wixii kaloo loo sameeyo line dhisay shuruudaha macmiisha.
1.On shaashadda weyn user ay u baahan tahay inay hesho goobaha in la bilaabo nidaamka.
2.Within goobaha user ay u baahan tahay inay hesho mail, xiriirada iyo kalandar in ay ku talaabsato habka ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
3.Beerta user markaas u baahan yahay in la hubiyo in button account add la taabtay in ay sii wadi arrintan la xiriira.
4.From shaashadda soo socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in Google waa la soo xulay liis sheegaan waxa soo socda.
5.The macluumaad la xiriira waa in la buuxiyaa foomka gal ah in soo socda ee arrintan la xiriira muuqataa.
6.The xiriirada yihiin in si loo hubiyo in xiriirrada Google yihiin synced la mid ah in waxa laga heli karaa qalab iPhone iyo halkan ka this sidoo kale ka baxayo geedi socodka si buuxda u user iyo inuu arki karo xiriirada gudahood ay horey u heli karo in lagu gagadin xiriirada ee telefoonka.
Si loo hubiyo in ugu wanaagsan waxaa la gaari la xiriirta arrinta sakhiray waxaa lagula talinayaa inay raacaan habka ah in la xiriira PC ama Mac, sida ma aha oo kaliya mid fudud, laakiin sidoo kale hubiyaan in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira. Marxaladani waxay sidoo kale hubineysaa in ay yihiin tallaabooyinka la xiriira ay fududahay in la raaco iyo sidoo kale kuwa la fulin karo iyada oo aan wax caawimo pro iyo haddii user weli ogaado in mid ka mid ah tallaabooyinka ku xusan ma aha kuwa ka dibna la fahmi karo waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in khubaro ee Wondershare iyo sidoo kale bulshada oo dhan halkan waa in ay caawiyaan user ee arrintan la xiriira si habka lagu dhameyn doono oo aan ka kaaftoomi kasta. Geedi socodka oo user u baahan yahay in la raaco arrintan la xiriira ayaa sidoo kale gundhig la Screenshot khuseeya iyo halkan waxa uu xitaa u fududahay in ay raacaan iyaga oo aan ka kaaftoomi wax noqdo. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira.
1. user u baahan yahay si loo hubiyo in www.gmail.com ama mail.google.com waxaa lagu heli iyo info ee login ku haboon la buuxiyo si xisaab Gmail waa la heli.
2.Once user ayaa saxiixay in uu u baahan yahay in la raaco jidka Gmail> xiriir.
3.All xiriirrada in ay tahay in la dhoofiyo waa la saxay waa in la hubiyo in kale xiriirada sii meesha ay joogaan.
User 4.The markaas u baahan yahay inay u dhoofiyaan xiriir in ay la soo xulay. Waayo, kan jidka in uu leeyahay in la raaco waa more> dhoofinta.
5.Now mar user u leeyahay in uu doorto koox ka mid ah xiriirada in ay tahay in la dhoofiyo PC ama Mac. Waxaa la samayn doonaa in uu furmo in kor booda mar kale halkaas oo faahfaahin ka ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa.
Qaab 6.The vCard waa xigta ay noqon doonto la xusho oo uu furmo suuqa isla halkaas oo xiriir ah ayaa loo soo xulay iyo button dhoofiyo waa in la riixi.
7.This ma aha oo kaliya dhameeyo nidaamka laakiin sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala si loo hubiyo in xiriir ah waxaa loo dhoofiyo sida vCard. Hadda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in email cusub la furo ku saabsan adeegga user la gaawaarida ama inuu doonayo inuu isticmaalo in email qaab vCard ah. File la dhoofiyo waa ka dibna in la lifaaqan oo waa in la saxafadeed. Email Tani waa in la furay iPhone bartilmaameedka si shaashadda soo socda u muuqataa.
8.It sidoo kale waa in la ogaadaa in mar file vCard la taabtay in la furo shaashadda soo socda ka muuqan doona kaas oo sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa.
Ku darista files vCard si iPhone weligii si fudud u isticmaala hal mar ay mari doontaa tutorial this. Waxa kale oo hubin doona in dadka isticmaala ay u hesho natiijooyinka ugu fiican oo aan wax arrintan iyo wixii kaloo la sameeyeen si xiriir ah meel kasta loo isticmaali karaa sida xiriirada iPhone. Waxaa sidoo kale in la xuso in iPhone aqbalo files vCard ka adeeg kasta oo loo eegin adeegga iPhone waa inuu xaqiijiyo in xiriir aan la raaciyay oo kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada kuwaas oo sax ah oo waafaqsan shuruudaha isticmaala . Si aad u taraynin faa'iido buuxda ee tutorial ah user ayaa sidoo kale su'aalo ka Wondershare bulshada codsan kartaa in arrintan la xiriira.
Sidee si ay u gudbiyaan videos ka pc si iPhone for free
> Resource > Transfer > 2 siyaabaha ay u gudbiyaan xiriirada Google inay iPhone